Kenya & Ugandha oo balaarinaya cudooda ciidan xili ay dagaalo kaga jiraan Somalia – SBC
Kenya & Ugandha oo balaarinaya cudooda ciidan xili ay dagaalo kaga jiraan Somalia
Iyadoo hawlgalo military oo naf iyo maal uu ku baxay ay gudaha Soomaaliya ka wadaan ciidamo ka socda Kenya & Ugandha ayaa waxaa soo baxaya warar horleh oo xaqiijinaya in xukuumada Nairobi & Kampala ay si buuxda u dhisayaan cududooda ciidan.
Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay waxay xooga saartey dhismaha awoodeeda ciidan iyadoo la xaqiijiyey in dagaalka ay haatan ka wado gudaha Soomaaliya ay u adeegsanayso diyaarado helicopters ah oo ay ka soo iibsatey Shiinaha, sidoo kale waxay adeegsanaysaa diyaaradaha dagaalka oo ay kala timid Jordan iyo gaadiidka kale ee dagaalka oo lagu farsameeyey Isra’il, waxaana lagu tilmaamay talaabadan mid Kenya ay ku xaqiijinayso amaankeeda oo ay kaga hortagayso weeraro argagixiso.
Warbixin cusub oo ay soo saartey hay’ada International Peace Research Institute (Sipri), ee fadhigeedu yahay magaalada Stockholm ee caasimada Sweden ayaa sheegtey in hawlgalka Kenya ka wado xuduuda Soomaaliya uu kordhiyey baahida hub soo iibsasho ee la doonayo in looga jawaabo qatarta amaanka.
Hay’adan Swedhiska-ka ah oo baaritaan ku sameysa xaaladaha amaanka ee aduunka waxay sheegtey in bilihii la soo dhaafay ay korortey iibsashada hub ee geeska Afrika gaar ahaan wadamada Kenya iyo Ugandha.
Taliska ciidamada Kenya wuxuu ka biyo diiday xaqiijinta inay ku jiraan dukaamasi ku aadan dhanka hubka gaar ahaan cududa ciidan ee dhanka cirka.
Wasiirka difaaca Kenya Yusuf Haji ayaa ku tilmaamay in wararka dhanka ciidamada ku saleysan aan loo baahneyn in la baahiyo taasi oo uu ku tilmaamay inay wax u dhimayso danaha qaran ee amaanka dalka.
Warar kale oo isa soo taraya ayaa sheegaya in Kenya ay wadaxaajood kula jirto dawlada Mareykanka sidii ay u balaarin laheyd maraakiibteeda dagaalka gaar ahaan kuwa xambaara diyaaradaha diyaaradaha sida nooca F-15.
Kenya waxay haatan dagaalka Soomaaliya u adeegsanayaa diyaaradaha dagaalka ee F-5E, waxaase la sheegay in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa duug ah oo aan la saan qaadi karin colaadaha xiligan aloosan.
Sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in Kenya ay kala hadashay Mareykanka sidii loogu wareejin lahaa qalabkii ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ka baxay adeegsan jireen.
Laakiin wasiirka difaaca Kenya Yusuf Haji wuxuu dafiray wararkaasi, isagoo ku tilmaamay warar sal iyo raad toona aan laheyn in Kenya ay doonayso inay soo iibsato diyaarao cusub oo dagaal.
“Waxaynu leenahay cudud ciidan oo adag, diyaaradaheena dagaalka ee F-5E waa kuwa tayo wanaagsan, waxaynuse u diyaar nahay hadii aynu helayno wixii gargaar ama taageero ah ee aynu heli karno, mase jirto inaan hada doonayno inaan soo gadasho sameyno” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Mr. Haji.
Laakiin hay’adda Sipri waxay sheegtey in Kenya ay heshiis hub la gashay Ukraine ayna kala soo wareegtey taangiyada dagaalka gaar ahaan nooca T-72, iyadoo markabkii sidey qalabkaasi ciidan uu sanadkii 2008-dii u gacan galey kooxaha burcad badeeda, iyadoo Kenya ay ku andacootey in hubkaasi uu u socdey Koonfurta Suudan.
Sidoo kale Kenya waxay la soo degtey 655 qoryaha bambooyinku ku xirmaan, 44,500 oo qoryaha fudud ah iyo 550 qoryaha boobayaasha ah, kuwaasi oo ay ka soo iibsatey Ukraine sanadihii 2007 iyo 2010 sida ay xustey Sipri.
Warbixinta Sipri waxay sheegtey in Kenya ay daaha ka saartey qaramada midoobay qorshaheeda gadashada hubka iyadoo sidoo kale ka qarisay la wareegiada Taangiyada T-72 gudiga qaramada midoobay ee tiro koobka hubka, iyadoo Kenya mudo taageersanayd mucaadooyinka iibka hubka, waxaana la sheegay inay ka baxdey balan ku aadaneyn inay ku soo wargaliso qaramada midoobay hubka ay la soo wareegto.
Uganda oo horey u aheyd wadan la soo degista hubka caan ku ahaa waxay dib u bilowdey dib u dhiska cududa dhanka military-ga.
Warbixinta Spri waxay sheegaysaa in Uganda anaay waligeed u soo gudbin heshiisyadeeda dhanka hubka laanta diiwan galinta kala iibsiga iyo heshiisyada hubka ee qaramadaamidoobay.
Wararku waxay sheegayaan in xukuumada Museveni sanadkii 2010 ay kala soo wareegtey Ruushka lix diyaaradaha dagaalka, isla sanadkaasi waxay warbixintu xustey in qoryaha bambooyinku ku xirmaan & kuwa daran dooriga u dhaca ay ka soo iibsatey wadamada Bulgaria & Ukraine.
Sidoo kale Ugandha waxay 37 kun oo hubka fudud ah kala soo wareegtey wadanka Ukraine sanadkii 2010.